राजधानी काठमाण्डौमा अ’नौ’ठो ध’न्दा: यसरी फ’स्छ’न् युवायुवतीहरु! – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > राजधानी काठमाण्डौमा अ’नौ’ठो ध’न्दा: यसरी फ’स्छ’न् युवायुवतीहरु!
राजधानी काठमाण्डौमा अ’नौ’ठो ध’न्दा: यसरी फ’स्छ’न् युवायुवतीहरु!
admin January 12, 2021 January 12, 2021 जीवनशैली, समाज	0
अहिले रमेशले सिर्जनाको परिवारलाई चौ’किमा लगेर कागज गराए । चौ’किमा सिर्जनाले सबैकुरा सुइकारिन । उनले ” मैले मन लाग्दा रमेशसङ शा’रीरिक स’म्बन्ध देखि सबै कुरा राखेकै हो अब देखि राख्दिन भन्दै मा’फी मागिन ।” अहिले रमेशको ८-१० लाख रुपैयाँ ती केटिको लागि सकिएको छ । दुबैले आफ्नो स्वा’र्थका लागि आ-आफ्नो प्रयोग गरे ,,। अहिले उनिहरु आ-आफ्नो बाटो हिडछन । यो घ’टना जससङ मात्र सम्भव छ कसैले स’म्बन्धित व्यक्तिलाई अ’सर पुर्याउने खालका कुरा नगरिदिनुहोला ,,! यो एक सत्य जिवनमा घ’टेको घ’टना हो । रात‍‍ो‍पाटीबाट
माता पाथिभराकाे दर्शन गरि हेर्नुहाेस ०७७ साल पुस २९ गते बुधबारकाे राशिफल यस्तो छ!
दशैंकाे मुखमा पैसा अाउनु पर्नेमा छोराकै लाश अाएपछि परिवारकाे यस्तो विचल्ली